Turkigu waa gumayste Muslim ah.Ka guur Dalkaaga una guur Turkiga maya maya maya !! W/Q: Khadar Ibrahim Aar • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Qoraalkaygani kuma wajahna kumana socdo, koox ama Xafiis isagu si gaar ah ugu adeega dadyawga Somaliyeed,kaasi oo qabta shaqooyinka ay ka midka yihiin soo saarista Visayaasha Cafimaadka,waxbarashada iyo dhamaan waxkasta oo markaasi dadka Soomalidaa u adeegaaya faa’idana ay ugu jirto.
Fahamka xeeldheerida siyaasadu waa shayga kaliya ee nolosha inteeda kale lagu maraayo,waana halbawlaha lagu hiigsado horumarka dawladnimada,siyaasad qoto dheer ku fadhida la’aanteedna cidina ma hiigsan karto halkay ay doonayso in ay gaadho beri iyo saadanbe.
Waxa aynu ka wada warqabnaa ,layaab iyo anfariirna dad badan oo caqli leh ku keenay in qofkasta oo Soomali ah isla markaana hantida jeebkiisu ay gaadho “Konton kun oo Dolar” in uu ku hawoonaayo in uu dalka Turkiga Guri ama gabood ka iibsado.
Ma ogtahay in qofkasta oo Somali ah isla markaana hantitisii oo dhan ku maalgaliyey dal shisheeye, in aakhirka dalkiisu uu baaba’aayo,waxaad dalkaagi kala tagaysaa Muwaadin dhaqalii,aqoontii,dhismahii,waxa aad maal galinaysaa nin kugu khiyaamaynaaya Muslinimo,ku dhacaaya,hab siyaasiya kula wareegaaya dhamaan hantilayaashadii.